Tuesday June 16, 2020 - 07:23:28 in Wararka by Mogadishu Times
Waa isbarbardhig ku saabsan matalaadda Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo Dowladda Somaliland. Labada dhinac markii u horreysay ee ay is hor fariistaan waxay ahayd January, 2012. Waxay ahayd Chevening House oo ah meel aan ka fogey
Waa isbarbardhig ku saabsan matalaadda Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo Dowladda Somaliland. Labada dhinac markii u horreysay ee ay is hor fariistaan waxay ahayd January, 2012. Waxay ahayd Chevening House oo ah meel aan ka fogeyn magaalada London. Shalay ka hor, kulankii u dambeeyay wuxuu ahaa 2014 oo ay labada Madaxweyne ku kulmeen Djibouti. Labada shir mid aniga oo suxufi ah ayaan joogay ergooyinkana gooni gooni ula kulmay. Midka kale, wafdiga Madaxweynaha ayaan ka mid ahaa oo miiska ayaan fadhiyay. Intii u dhexeysay si dhow ayaan ula socday. Marka aan suxufinnimo ku shaqeynayay labada dhinac ayaan xog wareysanayay. Marar kale aniga oo matalaya Soomaaliya ayaan wadahadalka uga qeyb galay Istanbul, Ankara oo ahayd kulan aqoonyahanno iyo Djibouti. Qaar kale qabanqaabada ayaan wax ku lahaa. Is arag aan la shaacinna si hoose ayaan xogtooda u helay. Ku dhowaad dhammaantood waxaa ii muuqata in aan labada dhinac ahayn isku diyaar garow xag macluumaad iyo waliba marka ay noqoto in aan waxba lala harin ee loo bareero dhinaca kale. Waxaan qabaa dareenka ah in ay isa soo hor fariistaan koox taqaanna waxa ay ka hadleyso iyo sida ay u dhigeyso, Iyo koox dooneysa Midnimo ay doonayaan in ay ku helaan "in ay u caqli celiyaan walaalhood." Istaraatiijiyada Somaliland waa in Soomaaliya ay noqoto laba dal oo koofuriyo Woqooyi ah. Waxay ku bixisay dhiig, kharash fara badan iyo borobagaanda. Waa dacaayad aan kala go' lahayn oo dadweynaha la gaarsiiyay, laguna celceliyay. Waxaa la hubiyay in shakhsi kastaa ay farriintu gaarto – mid awalba sidaa qabay amaba ka horreeya, mid hadda lagu qanciyo iyo mid lagu celceliyo ugu yaraan ilaa uu ka garaabo. Waxay saaxiibbo ku yeelatay Saxaafadda Caalamiga ah iyo diblomaasiyiinta shisheeye. Xafiisyo u sameysan suuq geynta siyaasadda ayaa la kireystay. Si doodda aan loo kala illoobin, marnabana aanay dadka madaxiisa uga bixin waxaa loo sameeyay astaamo lagu xusuusto. Mid keliya haddii aan xuso waa Taallada ay dayaaradda Miigga ahi saaran tahay ee qof og in aad og tahay sheekadeeda murugada leh aanuu ka caajiseyn in uu mar laba iyo ka badan kuugu soo celiyo. Somaliland shakhsiyaad beey leedahay loo bixiyay mujaahiddiin. Waxay la dagaallameen oo ay ka adkaadeen shakhsiyaad astaan looga dhigay shar oo loo bixiyay faqash.
Soomaaliya waxaa u safta Madax ay ku jiraan qaar ku soo booday ama lagu soo dhex tuuray wafdi baxaya, xilka ay ku magacaaban yihiin awgiis ama si loo buuxiyo 4.5 beesha ay ka soo jeedaan darteed.